महारानीगञ्ज माविको प्रशंसा |
महारानीगञ्ज माविको प्रशंसा
अर्जुनधारा नगर क्षेत्र अन्तर्गत सरकारी विद्यालयमा आम अभिभावक उपस्थित गराएर भए गरेका आय–व्याय मसिनो रुपमा सार्वजनिक गरेको हुँदा यो हप्ता अर्जुनधारा वडा नं. ११ स्थित महारानीगञ्ज मावि प्रशंसाको पात्र बनेको छ । प्रायः जसो विद्यालयले अझै पनि अभिभावक माझ विद्यालयमा भएका हरहिसाब सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आन्तरिक लेखासम्म ल्याउन सकेका छैनन्, सार्वजनिकको त कुरै छाडौं । तर, महारानीगञ्ज माविमा प्रदेश सांसद माननीय बृख प्रधानको उपस्थितिमा हिसाब सार्वजनिक गरेर अरु विद्यालयका अगाडि उदाहरणीय बनेको छ ।
संघ तथा प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारले पनि विद्यालयको स्तरोन्नति र खाजा खर्च प्रदान गरिएको हुन्छ । कुन नानीले खाजा खायो, खाएन ? कुन भवन कति रकममा बन्यो ? विद्यालयको कम्पाउण्ड निर्माणमा कहाँ कति रकम लाग्यो यो विषयमा हिसाब नहुनु, त्यतिमात्र होइन हिजोआज दाताहरुबाट पनि आफ्ना पितृका नाममा पुरस्कार तथा छात्रवृद्धि राखिएको हुन्छ । साथै विद्यार्थीका लागि खानेपानी, पुस्तकालय, शौचालय जस्ता ठाउँमा सहयोग प्रदान गरिएको हुन्छ । ती सहयोगको हरहिसाबसँगै पुरस्कार र छात्रवृद्धि प्रदान गर्ने कार्यमा अनेकौं बहानाबाजी आउने गरेको हुँदा त्यस्ता कार्यलाई महारानीगञ्ज माविले छर्लङ्ग पार्दै अरु विद्यालयप्रति प्रश्न उब्जाएको छ ।
महारानीगञ्जमा बालबालिकाको खाजादेखि दाताको छात्रवृद्धिसँगै सरकारले दिएको एक करोड ८ लाख १४ हजार पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा बराबरको आम्दानी खर्च विवरण प्रस्तुत गरेको छ । त्यस क्षेत्रका अभिभावकहरुको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो । प्रश्न राख्ने ठाउँ थिएन । पारदर्शीको एउटा नमूना यही हो भन्दै अभिभावकहरुले चित्त बुझाएका थिए । यस्तै कार्य अन्य विद्यालयले पनि अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । तर, धेरै जासो विद्यालयमा मान्यता विपरीत भईहाल्छ भन्ने सोचका कारण अख्तियारको पत्र पनि बुझेका छन् । नगरको इज्जत राख्नमा सरकारी विद्यालयको पनि धेरै ठूलो हात रहने भएको हुँदा त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।